Baidoa Media Center » Dalka Kenya oo maalinta beri ah laga ciidayo.
Dalka Kenya oo maalinta beri ah laga ciidayo.
August 29, 2011 - Written by admin - Edited byadmin Magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya ayaa waxaa looga diyaargaroobayaa dabaaldega Ciida soon fur oo ah maalinta beri ah sida ay sheegayaan wararka nagasoo gaaraya dalka Kenya. Masaajida magaalada Nairobi ayaa waxaa kasocoto Takbiirta Salaada Ciideed ayada oo ay dadkuna iskugu hambalyeynayaan ciida soonfur ee Ciidul Fitriga.
Dalka Kenya ayaa kamid noqonayo dalal dhowr ah oo Islaam ah kuwaasoo lagaga dhawaaqay inay maalinta beri ah tahay Ciid balse dalal badan ayaanan weli kudhawaaqin inay maalinta beri ah noqonayso Ciid iyo in kale waxaana kamid ah dalalkaas dalka Soomaaliya oo la deris ah Kenya.